तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको जनावर तपाईं के भन्नुहुन्छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुन. 26 2020 |3मिनेट पढ्न
यो जस्तै वा छैन, हामी जीवनको जाने बाटो हाम्रो व्यक्तित्वको विभिन्न पक्षहरू बारेमा धेरै कुरा बताएको. उदाहरणका लागि, कार्यस्थल मा सतर्क छ जो कसैले सामान्य सिद्धताको अपेक्षा राख्ने लागि एक झुकाव जीवनको तिर अलि बढी कठोर दृष्टिकोण थियो. अर्कोतर्फ, तपाईं लगभग आफ्नो शर्ट आस्तीन मा केचप संग कार्यालय आउनुभएको सहकर्मी शायद राम्ररी व्यक्ति होइन भनेर निश्चित हुन सक्छ. निस्सन्देह, यो एक व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्व को एक बैरोमीटर हुनु हुँदैन. तथापि, तिनीहरूले एक व्यक्ति सामान्यतया जीवन बुझ्न कसरी हुनेछ को एक सुरक्षित सङ्केत हो. यो विस्तार, घरपालुवा जनावरको रूपमा विभिन्न जनावर लागि बाहिरिनु मानिसहरूलाई सामान्य केही विशेषताहरु भाग हुनेछ.
राम्रो खबर कुकुर मालिक अत्यन्तै मायालु हो कि छ, दिल न्यानो र प्रतिबद्ध. आखिर, कुकुर को हेरविचार सेवन गर्नुपर्छ. आफ्नो साथी कुकुर व्यक्ति छ भने, तिनीहरूले सम्बन्ध अझ मायालु हुन गर्छन एक धेरै उच्च मौका छ. कुकुर प्रेम गर्ने पनि कुकुर पछि सबै ध्यान को एक धेरै साथ आवश्यकता मात्र कारण वास्तवमा अझ बढी जिम्मेवार हुनेछ. कुकुर मालिक बारेमा एउटा राम्रो कुरा तथ्य हो भनेर भन्दा पटक, तिनीहरूले सबैभन्दा भरपर्दो र धेरै को इमानदार छन्.
बिल्ली आसपास मान्छे धेरै चासै हुन चिनिएका छन्. तथापि, तिनीहरूले पनि धेरै संवेदनशील प्राणीहरू हुन् र वास्तवमा स्नेह लालसा. बिल्ली मालिक यस्तै विशेषताहरु चित्रण. तिनीहरूले अत्यधिक आफ्नो जाते संलग्न र वास्तवमा आकर्षणको केन्द्र रमाउँछु छन् (तिनीहरूले यस देखाउन छैन सक्छ हुनत). एक बिरालो मालिक डेटिङ गर्न प्रमुख ध्यान को नै राशि देखाउने र आफ्ना भावनाहरूलाई संवेदनशील भएर हो.
निस्सन्देह, यो एक घर घरपालुवा चरा राख्न वास्तवमा सही छ कि बारेमा निकै बहस छ. केही मानिसहरू आफ्नो बगैंचामा चरा पिंजरों निर्माण र आफ्नो चरा तिनीहरूले स्वाभाविक जस्तै बारेमा घुम्न गर्ने स्वतन्त्रता दिएर यसको वरिपरि प्राप्त गर्छन् तापनि. बर्ड स्वामी एक समय मा र जस्तै एक दिन आफ्नो जीवन बिताउन, सामान्यतया गैर-conformist सेटिङ पाइन्छ छन्. तिनीहरू पनि बढी रचनात्मक र साहसिक हुन्छन्.
घरपालुवा हुन सक्छ घरपालुवा जनावरको रूपमा माछा गैर-चेतन वस्तुहरु रूपमा करीब हो. पक्का, यो माछा कचौरा या ट्यांक मा माछा पौडी हेर्न ठूलो छ. तथापि, एक साँच्चै माछाले धेरै दुई-तरिका अन्तरक्रिया प्राप्त गर्दैन. घरपालुवा जनावरको रूपमा रहेर माछाले आनन्द उठाउन जो मान्छे सबै भन्दा भन्दा सामान्यतया भूकम्प हो. तथापि, तिनीहरूले पनि अन्य मानिसहरू भन्दा बढी सकारात्मक हो र सामान्यतया पारंपरिक समाज मान्यताहरूमा चिन्तित छैनन्.
खरायो, hamsters र गिनी सुँगुरहरु
यी पशुहरू सामान्य अधिक युवा बच्चाहरु र किशोर-किशोरी द्वारा इष्ट छन्. निस्सन्देह, साना राख्न वयस्कहरूले को एक नम्बर पनि छन्, घरपालुवा जनावरको रूपमा पोस्तीन प्राणीहरू. यी सामान्यतया पारस्परिक सम्बन्धको मजा गर्न तर जाते मामला मा पहिलो जमीन परीक्षण गर्न इच्छुक छन्, जो मानिसहरू हुन्. तिनीहरू पनि जिम्मेवारी तिर झुकाव न्यानो र मायालु छन्. यी पाल्तु जनावर प्रेम गर्ने मजा मायालु र विनोदी हो.
घरमा जान्छन् छैन गर्नेहरूलाई के? अथवा पनि ती जनावरहरूको लागि कुनै पनि प्रेम दाबी नगर्ने? यस अवसरमा, यो निश्चित रूप तिनीहरूले दिल जाडो हुन्छ वा सम्बन्ध मायालु लागि बजार मा छैनन् भन्ने होइन. परिस्थितिले अरूलाई घरपालुवा आफु भन्दा कसैले बढी इच्छुक हुनेछ निर्धारण मा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न. गैर-पाल्तु जनावर मालिक पनि धेरै वफादार हुन सक्छ, जिम्मेवार र हेरचाह गर्ने!
संक्षेप मा, यो तपाईं माथि वर्णन गुणहरू को कुनै पनि छैन जो घरपालुवा मालिक भर हुनेछ भनेर धेरै संभावना छ. यो एक प्रेम जनावरको को प्रकार अनुसार व्यक्तित्व लक्षण को कुनै निश्चित सूची छ. तथापि, पर्याप्त अनुसन्धान प्रत्येक पशु प्रेमी अधिकार संभावना छ विशेषताहरु र विशेषताहरु मा एक सामान्य सहमति छ भनी देखाउन सञ्चालन गरिएको छ. जस्तोसुकै पत्रु घरमा राखिएको छ कि, एक सम्बन्ध अझै दुई प्रतिबद्ध मान्छे बीच दुई बराबर भागहरु को योग छ.